Maxkmada ICJ oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya -
Maamulka gobolka Banaadir oo amray in dadka ay xirtaan Af-xir ama…
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo shir u socda
European lawmakers call for action against Israel’s “de facto annexation” of…
Armenian protesters break into the government building and demand PM Pashinyan’s…
Former French President Nicolas Sarkozy has been jailed for corruption
Home News Maxkmada ICJ oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda ee Soomaaliya...
Maxkmada ICJ oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee ICJ ayaa gaashaanka ku dhufatay dalab uga yimid Kenya oo dooneysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda kala dhexeysa Soomaaliya.
“Ka dib markii ay maxkamaddu tixgelisay doodaha labada dhinac ay soo gudbiyeen ayaa waxay go’aansatay in jadwalka dhageysiga u sidiisii ahaado, wuxuuna billaabanayaa 15-ka march 2021″, ayaa lagu yiri qoraal ay maxkamaddu u dirtay dowladda Soomaaliya oo dacwaddan maxkmadda gaysay 7 sano ka hor.
Ujeedka arrintan ay u codsadeen ayay ku sheegay sababo la xiriira cudurka Covid-19 oo saameyn weyn ku yeeshay howlihii diyaargarowga kiiska ee ay wadday Kenya.
Kenya ayaa garsoorka maxkamadda ku wargelisay in aysan dhageysiga dacwadda uga qeyb gali karin si rasmi ah, iyadoo ay jirto khatar dhinaca amniga ah oo waddanka ku imaan karta oo ku xiran natiijada kasoo baxda dacwadda la gudbiyay sanadkii 2014-kii.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go’aanka ka soo baxay maxkamadda.
Ra”isal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleeed ayaa sheegay in Soomalaiya ay diyaar u tahay ka qeybgalka dhageysiga oo qaab fogaan-arag ah lagu qaban doono.
Maxkamaddu waxa ay shegetay in sidoo kale tiro xaddidan lo oggoalan doono inay hoolka maxkamadda joogana inta u socdo dhageysiga.
Previous articleBeesha Caalamka oo ku baaqday in wadatashi lagala yeesho Saamilayda Siyaasadda Arrimaha Doorashooyinka
Next articleRasaas lagu furay gaari uu la socday Imaam Maxamed Yuusuf
Maxkamada Caalamiga ah ee ICJ oo war ka soo saartay dacwadda badda ee Somaliya iyo Kenya
Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo 3 sano oo xarig ah lagu xukumay